आईओएस बजारको% ०% पुगेको छ आईफोन समाचार
आईओएस बजारको% ०% मा पुग्छ
जोस अजाम्बुया | | iOS 7
एप्पलले आफ्नो नयाँ अपरेटिंग सिस्टम आईओएस of को प्रवेशको सम्बन्धमा एउटा रोचक अपडेट प्रकाशित गरेको छ। कपर्टिनो फर्मका अनुसार, आईओएस already सँग पहिले नै बजारको7०% भन्दा कम छ। यी तथ्यांकहरूमा पुग्न, एप्पलले यसको एप स्टोरलाई सन्दर्भको रूपमा प्रयोग गरेको छ, स्टोर प्रवेश गरेका सबैको मूल्यांकन गर्दै बितेको १ store जुलाईमा समाप्त भएको days दिनको अवधिमा भण्डारले भनेका थिए। यो स्पष्ट छैन, आईओएस which को कुन संस्करणहरूमा काम गरिरहेकाहरूको संख्या।
जे भए पनि, यो एप्पलका लागि राम्रो खबर हो, जसले कसरी हेर्दछ बजार विखंडन एक समस्या छैन जुन तपाईंको मोबाइल प्लेटफर्ममा अवस्थित छl, एन्ड्रोइड जस्तो छैन जुन यस सम्बन्धमा गडबड छ। कपर्टिनो कम्पनी एक कदम अगाडि अगाडि बढेको छ र हामीलाई हाइलाइट गरेको छ कि एक सक्रिय आईओएस उपकरणहरूको devices% आईओएस .9.० चलाउँछन् र पुरानो संस्करणको साथ केवल २% रन। स्पष्ट रूपमा, जो कोही जोडी जान्न जान्दछन् कि यी प्रतिशतको योगले १०१% प्रदान गर्दछ जुन एप्पलको लागि यी केसहरूमा गोल हुने सम्भाव्य भन्दा बढी छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि एप्पल मिनिमलिज्मको साथ व्याकुल छ र "। ०.2२%" भन्नु भन्दा "% ०%" भन्नु धेरै "मिनिमललिस्ट" हो।
जे भए पनि, एप्पल द्वारा प्रदान गरिएको तथ्या also्क पनि केहि सावधानीका साथ लिनुपर्दछ। र यो यो हो कि कम्पनी आफैंले प्रस्तुत गरेको आंकडाको बावजुद, यसले केवल एक हप्तामा अनुप्रयोग स्टोर पहुँच गरेका मानिसहरूलाई खातामा लिन्छ। मसँग व्यक्तिगत आईओएस have छ र Store हप्तामा मैले App Store एक्सेस गरेको छैन। यस अर्थमा, यदि तपाईं अनुप्रयोग स्टोर पहुँच गर्नुहुन्छ यो स्पष्ट हुन्छ कि तपाईं आफ्नो उपकरणसँग अधिक "सामेल" हुनुहुन्छ र त्यसैले यसको अपरेटिंग प्रणालीको सबैभन्दा नयाँ संस्करण हुने सम्भावना बढी छ। २०११ मा आईफोन किनेको पछि। वा applications अनुप्रयोगहरू स्थापना गरेका आईओएस running चलाउन जारी राख्दछन् र अनुप्रयोग स्टोरमा प्रवेश गर्दैनन्, त्यसैले अध्ययनलाई शंकाको केही निश्चित डिग्री लिनुपर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» आईओएस बजारको% ०% मा पुग्छ
केहि टेबलोइड हेडलाईन, हैन?
Hichi75 लाई जवाफ दिनुहोस्
एक उत्तर अलि स्थानको ठीक छ? मानिसहरु कती भारी छन् जो यस पृष्ठका पोष्टहरूका बारे मूर्खता राख्न चाहँदैनन् ... मेरी आमा!
यो ट्यालोइड किन हो? गुगलले यो डाटा मासिक प्रकाशित गर्दछ, यो जानकारी हो, अरू केहि पनि छैन।
मेरो मतलब हेडलाईन: जब मैले यो पहिलो कुरा देखेँ मैले सोचें कि के थियो तर तपाईं के भन्नुहुन्छ, यदि बजार %०% Android हो भने! त्यसोभए तपाईले खबर पढ्नुभयो र तपाईले देख्नु भयो कि म के भन्न चाहन्छु कि ios इकोसिस्टम भित्र 80% उपकरणहरू ios90 मा अपडेट गरिएको छ। यो पहेँलो वा खराब निर्णय हुनेछ तर मलाई यो लाग्छ कि हेडलाईन सबैभन्दा उपयुक्त छैन। मेरो विचार, अवश्य
माफ गर्नुहोस्, म भारी भएको ढोंग गर्दिन, यद्यपि म बगैंचाको आनन्दको रूपमा पनि गर्दिन। जे भए पनि, मलाई लाग्दैन कि मैले कुनै बुलसिट भनेकी छु। सबैजनाको दृष्टिकोण वा तिनीहरूको प्रभावहरू हुन्छन्। र यस पृष्ठको बिरूद्ध मसँग केहि छैन, अन्यथा म यसलाई हेर्ने छैन, तर किनकि तिनीहरूले तपाईंलाई प्रणाम गर्न दिन्छन्, म राम्रो गर्छु।
मुद्दा के हो भने त्यो प्रतिशतको कति प्रतिशत साँच्चिकै खुसी छ वा आईओएस have प्राप्त गर्न चाहन्छ? किनकि तपाईं प्रयोगकर्ताहरूलाई आईओएस install स्थापना गर्न जबरजस्ती गर्न सक्नुहुन्न र त्यस प्रतिशतको बारेमा बढाइ गर्नुहुनेछ।
मेरो राय मा यो मलाई लाग्छ कि सबै अपरेटिंग प्रणाली को खराब डिजाइन आज छ कि। मैले देखेको मात्र कुरा सेतो, सेतो र सेतो र सेतो र कन्ट्रास्टहरूको अभाव, सीमा र छायांकन, केहि चीज जसले यसलाई आइकनहरू र विकल्पहरू हेर्न र भिन्न गर्न सजिलो बनाउँदछ।
प्रदर्शन उल्लेख छैन। आईओएस with को साथ मेरो आईफोन I अहिलेको आईफोन S एस भन्दा म भन्दा राम्रो र छिटो थियो। म धेरै नाखुश छु र म पक्कै पनि ट्रेंडको परिवर्तनको लागि पर्खन्छ, दुबै स्क्रिन आकार र डिजाइन को अनुसरण गर्न, मेरो फोन नवीकरण गर्न।
Xser लाई जवाफ दिनुहोस्
जुआनकार्लोस्ब्रैकामोन्टेलोपेजलाई जवाफ दिनुहोस्
उच्च-गुणवत्ताको माइक्रोफोन, रोड IXY अब बिजुली द्वारा कनेक्शन डेबुट गर्दछ
ड्रपबक्सले सिnc्क समयलाई आधा गरेर बढाउँदछ